Sugida SANADKA CUSUB - Qaybta 2aad - Dhulka Barakaysan ee Daraasadaha Vietnam
1662 Views Prof. Assoc. HUNG NGUYEN MANH
Tcaadadiisu tahay "Dayactirka Dabka"
At Kẻ Rì, Kẻ Chè (Degmada Đông Sơn) iyo sidoo kale at Tuulada Tương (Degmada Thiệu Yên),, labadooduba waxay khuseeyaan Thanh Hoa, dadku waxay u fiirsan jireen caado ahaan joogteynta dabka (Fig.4) jikada iyo laambada laambada habeenkii oo dhan iyada oo ujeedadu tahay in lagu sii hayo dabka sannadka hore sidii uu u guban lahaa sanadka cusub, iyada oo aan wax lug ah ku lug lahayn dabka la gubay.
Caadada "Wacitaanka Bariiska"
on the sanadka cusubhabeenka, dadka at Phù Lễ (Tuulada Phúc Hoà, Tân Yên, Degmo, Bắc Giang) u dir wiilkooda oo dhan, iyagoo ku hubaysan ulo iyo ulo, si gaadmo ugu gaadha duurka hoostiisa amarkii awowgaa. Saqdii dhexe, aabbenku wuxuu rasaas ku ridayaa laba qori oo rasaas ah oo ay ku xigto durbaanno, iyo dhawaqyada tocksins iyo qalabka dabaysha oo meelkasta ka dhacaya. Nimankii dhallinyarada ahaa markaa waxay ku noqdeen tuulada, laakiin, irdahooda, waxay istaagaan oo sugaan aabbahaa oo cod weyn ugu yeeraya tuulada:
Bariis! Bariis! Bariis!
Bariis xoogaa bariis ah, baaquli biyo ah si aad ugu diyaariso bariis dhagxan leh, Bariis! ”
Markuu awowgu dhammeeyey qayladiisii, ayaa nimankii dhallinyar ay cod dheer ku qaylinayeen:
Ah! Ah! Kadib durbaanka iyo dhawaaqa tocsins iyo qalabka dabaysha ayaa mar labaad ka soo wada socda guri, nin ayaa ka soo baxaya, si weyn ayuu albaabka u furi doonaa oo wuxuu siinayaa koox koob oo cad oo macaan oo udgoon. Aabbihii wuxuu soo qaatay baaquli bariis ah oo cufan wuxuuna ku shubaa dambiil, ka dib wuxuu sii wadaa inuu kooxda ku hoggaamiyo guryaha kale si uu ugu celiyo nashaadaas. Markay gaadheen gurigii ugu dambeeyay, waagii ayaa la yimid, kooxda oo dhammuna waxay ku noqotay duurka ka baxsan tuulada si ay u nastaan. Hadda waxaa la joogaa waqtigii dumarkii hore ay soo muuqan lahaayeen. Tuulada waxay aadeen meesha kooxdii ragga yari ay ku nasanayaan; ka dib, iyagoo adeegsanaya xaddiga bariiska xad-dhaafka ah ee ay heleen, waxay kariyeen bariis dheg dheg leh, waxay u qaybiyeen bariiska ku dhegan dhegaha qeybaha yaryar, ku duub caleemo mooska oo u qeybi mid kasta oo ka mid ah ragga dhallinyarada ah qayb uu ku cuno milix cad. Intaas ka dib, qof walba wuxuu ku farxay guryahooda si uu u salaamo Rabbiga sanadka cusub.4
Caadada "Wicitaanka onkodka"5
Ka sokow caadada "bariis"Si loo toosiyo paddy, waxaa kale oo jira caado ah"dib ugu yeeridda onkod”. Tani waa sababta oo ah dadku waxay ku soo toosaan paddy sida inay dhulka u toosiyaan si ay wax u beertaan, u qodaan oo ay wax ku beero, laakiin, dhulku wuxuu u baahan yahay biyo ie onkod waxaa loo baahan yahay in la soo saaro roob onkod ah oo u oggolaanaya xayawaanka inay si dhaqso leh u koraan:
Bishii shanaad ayaa bariiskii uu marayaa isagoo dhuumanaya meel u dhow gees,
Mar alla markii la maqlo onkod, waxay ku ruxmi doontaa calanka oo si dhakhso leh ayey u koraysaa ”.
Marka loo eego caadooyinkii hore, markii la sii wado dhawaaqa onkodka, dadku waxay soo bandhigaan hoobiyeyaal, toundins to pound, si ay u garaacaan si ay u keenaan dhawaqyadooda, oo ay la socdaan dhawaqyada sanqadha iyo durdurrada si ay u bilaabaan, sidaas darteed, iyagoo jilaya dhawaqa dhawaaqa bilowga Spring iyo onkod roob doon ah si ay u soo noqdaan roob keenaya. Marka la eego dhaqankan, wali ma aanan awoodin inaan go'aan ka gaarno waqtiga saxda ah weli (dhamaadka sanadka dayaxa ama bilowga sannadka cusub).
Daqiiqada xurmada leh
The Xaaladda Sannadka Cusub waa waqtiga ugu xurmada badan sanadka markii cirka iyo cirku midba midka kale isdarogaayo, casriga la diro oo la soo dhoweeyo kan cusub. Sikastaba, qofka ku nool miyiga daqiiqaddan xurmada leh wuxuu arki karaa haweeney laambad gacanteeda ku jirto iyo ul ku jirta gacanta kale ee raadineysa deynkeeda, wuuna garan karaa waqtiga adag ee ay naag naag fiican qabta leedahay!
Nalalka wuxuu la mid yahay nooca nalka dhalada, tusaale ahaan, laydhka batroolka iyo hooskiisa laambada ee ka samaysan jirridda dhalada. Qofka haya laambada ayaa qorayaashu ku tilmaameen inay tahay hag weyn oo haweeney dufan leh oo ku dheji gacanteeda dhanka kale si ay ugu tiirsato iyo waliba eeyaha. Muuqaalkan dhabta ah wuxuu muujinayaa isla markaana dhalleeceeyaa bulsho aad u naxariis daran feudalistic. Xaaladda mugdiga ah ee mugdiga ah waxaa lagu caddeeyay 30th Tết habeen marka qoysaska oo dhami ay si taxaddar leh albaabada u xidhaan, “tuugada” ayaa hareeraha ka qodan kara iyagoo iskudayaya inay kala jeexjeexaan dhawr xabbo oo moofo ah oo bariis cufan leh, ul dufan doofaar ah, dheriga hilibka la qaboojiyey… oo soo afjaraysa bil ka hor Tết oo saacad dhow leh waa lagama maarmaan kuwaas oo ah Chp ama bishii ugu dambeysay ee sanadka ay tuugada iyo dhacayaashu tirin waayaan sida dixiriga clam (Fig.5).
Ninkii doonaya inuu ka tago meeshiisii ​​hooyo si uu nolol u helo oo hadda uusan ku noqon karin waddankiisa runti waa murugo! Hada iyo ka dib qulqulaya ayaa loo maqlayaa inuu soo dhaweynayo maamulaha cusub - aaminsanaanta ayaa ah in laba iyo toban Maamuleyaal ay isu rogaan oo ay ilaaliyaan arrimaha adduunka laga bilaabo sanadka Tý (mouse) sanadka H .i (Doofaarka) wareegga laba iyo toban sano ah. Maamule kastaa wuxuu leeyahay cinwaanka xukunka hanad sanadka oo uu leeyahay kaaliye. Maamulaha ayaa fiican ama xun. Midka xun ayaa ka hadlaya codsi Cirka inay sababaan masiibooyin: abaaro, daadad, goosasho xun, gaajo, cudurrada faafa ... in la ciqaabo dhaqan-xumo iyo dhaqan xumo Kings iyo saraakiil sarsare.
4 Sida ku xusan shaqada ay xaq u leedahay: “Địa Chí Hà Bắc” Monography of Hà Bắc - Adeegga Macluumaadka iyo Dhaqanka - Maktabadda Hà Bắc 1982 - p.538.
5 Sida laga soo xigtay LÊ TRUNG VŨ - Dhaqanka Tết ee Fiyatnaamiis - Buugga la soo xigtay - p.99.
◊ Sugida SANADKA CUSUB - Qaybta 1aad
◊ Caadada RECELEBRATING TẾT
(Booqday jeer 1,296, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 1,698
← Bandhigga Jaaliyadaha jikada - Qaybta 2aad
Sugida SANADKA CUSUB - Qaybta 1aad →